Gear yokuderedza, Cycloidal Speed ​​yokuderedza, honye Gearbox, Dc Motor - Devo Gear
Nemazvo yemapuraneti giya yokuderedza
Cycloidal Speed ​​yokuderedza
Nmrv honye Gear yokuderedza
Nmrv honye giya yokuderedza, zviri duku vhoriyamu, chiedza uremu, nokukwirira zvichiratidza kunyatsoshanda, huru goho torque, kumeso kumhanya uye pasi ruzha. Zviri suitbale nzvimbo dzose.
R dzino helical giya yokuderedza chinhu yepamusoro akaitwa pfungwa akasuma kubva kune dzimwe nyika mumakore achangopfuura. It kunokudziridzwa uye kugadzirwa nezvinhu zvine chimiro, simba pakawanda, mukuru kuvimbika, pasi tembiricha simuka, hombe kubereka vanokwanisa uye wakanaka mubatanidzwa waivako akabatana chinangwa chokwadi venyika yedu. Inogona pamwe F series, K series, S series, etc. kuwana yakaderera nokukurumidza uye mukuru torque.
Devo R Series RX 37 ~ 157 vanachandagwinyira zino parutivi singl ...
Devo R Series rutsoka akatasva helical giya yokuderedza
WPA giya yokuderedza chinjikira giya bhokisi kutwasuka W ...
WPA havukavu reducertransmission giya yokuderedza waHori ...
WPA WPS honye nokukurumidza yokuderedza reductor gearbox WPA ...
High yepamusoro RX dzino helical giya reductor
yepamusoro zq 500 giya yokuderedza zq 350 gearbo ...
(J) ZQ 250-1000 Series nyoro giya pamusoro gearbox ...
(J) ZQ 850 nyoro giya pamusoro gearbox nokuda rakentaminen ...
(J) ZQ 650 nyoro giya pamusoro gearbox nokuda rakentaminen ...
kurudyi angled yemapuraneti yokuderedza danho gearbox serv ...
2019 yose inopisa rokutengesa yakakwirira torque nokukurumidza yokuderedza ...
Jiangsu Devo Gear Technology Co., Ltd. rakaumbwa muna 2018. Rakanga yakavambwa neboka vechidiki vane enterprising mweya. Zvinonzi akatsunga kuita zvakanaka giya bhokisi mumakore 100. The kambani iri vanhu 50-100, pamwe nenyanzvi R & BSN; D, magadzirirwo, okutengesa chikwata, zvigadzirwa tengesa zvakanaka pamusha uye kunze, musika ari kunyanya kuisa overseas.Provide vatengi pamwe munhu zvichienderana solutions.On hwaro reciprocity uye tose
No. 403, Kuvaka 2, Material Market, No. 170, Xiadian Road, Xuzhou, Jiangsu, China (Mainland)
Nmrv honye Gearbox , Nmrv130 , Nmrv050 , Gearbox Nmrv , Nmrv yokuderedza , Nmrv63 ,